देउवा र प्रचण्डबीच आधा घण्टा के भयो कुराकानी ? -
देउवा र प्रचण्डबीच आधा घण्टा के भयो कुराकानी ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो तीन बजेतिर देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । उनीहरुबीच करिब आधा घण्टा भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटवार्ताबारे देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने, ‘समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो । खास प्रस्ताव केही रहेनछ । संसद विघटन विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका दलहरु मिलेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने भनेर उहाँले पुरानै कुरा दोहोर्याउनु भयो । यो कुरा सधै भएकै हो । फेरि सल्लाह गरेर कुरा गरौंला ।’
उनका अनुसार पहिला सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन देउवाले प्रचण्डलाई सुझाएका थिए । प्रचण्डसँगको भेटमा देउवाले भनेका थिए , ‘पहिला समर्थन फिर्ता लिनुहोस् । त्यसपछि बल्ल नयाँ सरकार गठनबारे प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
‘पहिलो परिपक्व परिस्थिति निर्माण गरौ । जसपा एक ढिक्का हुनुपर्यो । काँग्रेसले चाहेर मात्र सरकार बन्ने अवस्था छैन यो कुरा तपाईले बुझ्नु नै भएको छ । अर्कातिर तपाई आफै प्रस्ट हुनुभएको देखिँदैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भानुले भने ।